Vaovao - Namboarina tamin'ny latabatra IRON T TALOHA FITSABOANA ALOHA ho an'ny mpanjifa Aostraliana
Hebei Bocheng mpiara-mamorona fandrefesana fitaovana manamboatra Co., Ltd dia hanolotra anao ny takelaka vy vy misy kalitao avo lenta, vidiny mifaninana ary serivisy aorian'ny fivarotana
Ny orinasanay koa dia manao famolavolana, fampandrosoana ary famokarana vokatra amam-panao ary manome vahaolana tanjona manokana amin'ny tsipika famokarana mifandraika amin'izany.
Izahay koa dia manao famokarana OEM ho an'ny marika eto an-toerana sy any ivelany.
Fitaovana sy fanodinana:
(1) Ny fitaovan'ny takelaka / latabatra ambonintsika dia vy HT200-300
(2) Ny hamafin'ny asa dia HB170-240
(3) Fahadisoana ambany ambany ary tsara amin'ny familiana fanoherana.
Ny takelaka vy vita amin'ny vy dia be mpampiasa, ampiasaina amin'ny famokarana milina, simika, fitaovana, aerospace, solika, famokarana fiara, fitaovana ary orinasa hafa.
1.cast takelaka fanandramana vy: ampiasaina matetika hizahana ny lesoka amin'ny workpiece ao amin'ny benchmark.
2. ny takelaka fivoriambe: ho an'ny famokarana vokatra feno, fananganana komisiona. Ny vy Cast T slotted takelaka tranokala azo zakaina eo amin'ny lampihazo mba hanatsarana ny fivorian'ny fiangonana sy ny fahombiazany.
3.cast vy niampita sehatra: ampiasaina indrindra ho an'ny faritra maro amin'ny fisaka niampita sy telo-habe niampita, ny lampihazo mihitsy dia mari-pamantarana marindrano, Workpieces amin'ny sehatry ny asany dia azo tratrarina avo lenta.
4.cast plate base iron: indrindra ho an'ny fitaovana lehibe, ny fametrahana ny debugging sy ny fandrefesana ny workpiece.
5.cast sehatry ny fitotoana vy: ny refy marina momba ny fitotoan'ny lovia dia avo dia avo, azonao atao ny mampiasa ny detectionment vita amin'ny mazava tsara, na ny fikolokoloana sy ny famolavolana workpiece.
Serivisy aorian'ny fivarotana.
Ny vokatra rehetra dia efa voamarina tsara tao amin'ny trano fiasana alohan'ny hamonosana.
Azontsika atao ny mandray an-tanana ny hetsika fampiakarana na fametahana na ny planina fametrahana.
Manome ny tatitra momba ny tetikasa vita izahay. Anisan'izany ny fifanarahana, ny sary, ny takelaka nalaina, ny Proforma
Faktiora, famaritana ara-teknika, fandaharam-potoana fanaraha-maso fandrosoana, fitsapana ary fanaraha-maso
Tatitra, B / L, Fiantohana, faktiora ara-barotra, lisitry ny fonosana, taratasy fanamarinana niandohana.
Fe-potoana fandoavam-bola: T / T, L / C, Paypal, sns.
Fotoana fandefasana: vokatra ao anaty tahiry -7 andro. Vokatra namboarina-15-30 andro
Aza misalasala mifandray aminay raha liana ihany koa ianao: